Ogaden News Agency (ONA) – Baxsigi Ciidamada Hawaarinta iyo Ethiopia oo maareyn kariweyday
Baxsigi Ciidamada Hawaarinta iyo Ethiopia oo maareyn kariweyday
Posted by ONA Admin	/ June 10, 2013
Saraakiil kasocota Dowlada Dhexe Ethiopia oo Baadhitano ku heysa Baxsiga Liyu Poliska iyo Cidi lagu eedeyn lahaa ee Maamulka Kililka
Ciidamadi Liyu Polsika ee Qomandaha ku xidhna oo loo badalay Xabsikale
Gumeysiga Ethiopia ayaa sameystay dhalinyaro lagu qasbay inay u noqdaan maliishiyaad kuwaas oo lagu tababaray sidii ay shacabkooda u gumaadi lahaayeen. Ciidamadan oo Liyu Polis ama hawaarin loo yaqaano waxay deegaanka ka geysteen dhibaato badan oo leh dil, kufsi, barokicin iyo waxyeelo aad u daran midaas oo saameyn badan ku keentay noloshi shacabweynaha somalida Ogadniya.
Dhalinyarti hawaarinta ayaa dib ugusoo jeedsaday gumeysiga Ethiopia kadib markii Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya (JWXO) ay go’aansatay inay daggaal lamid ah midka ciidamada Woyanaha oo kale-ay ku fulisay. Dhowr hawlgalood oo Ciidamada JWXO ku qaaday malishiyaadkan laguna burburiyay goobo lagu tababari jiray Liyu Poliska. Waxaa Gumeysiga Ethiopia oggaaday in danti ay ka lahaayeen dhalinyaradan madaxa laga qalday aansan la gaadhi karin. Waxaana Dhalinyaradan lagu leexiyay oo shaqo looga dhigay inay shacabka waxyeelo kula kacaan lagana fogeeyo goobaha Ciidank JWXO.
Hadaba inbadan oo kamid ah Liyupoliska markii ay arkeen danaha laga leeyahay waxay go’aansadeen inay kasoo fakadaan ciidamada Liyu Poliska iyaga o damaanad qaadna ka heysta Jabhada ONLF oo u balan qaaday in labadbaadin doono cidii go’ansata inay ka baxdo Hawaarinta.
Dhowr qeybood oo kamid ah Ciidamada hawaarinta ayaa gabi ahaantoodaba loo dhaadhiciyay Jeelashawaaweyn ee Ethiopia markii ciidamo faro badan oo kamid ahi ay isu dhiibeen ciidamada Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya.
Ciidamadaas waxaa kamid ah Qeyb muddo dhowr todobaad aheyd ku xidhnaa xabsiga Qoomandaha ee magaalada Jig Jiga. Ciiadamadan Liyu Poliska ee halkaas ku xidhnaa ayaa lagu maraamaray iyada oo gumeysigu iskudayay innuu ka helo siro iyo wararka la xidhiidha sababta ay hawaarintu u goosanayaan iyo cida ka danbeysa baxsigooda ee kamidka ah saraakisha sare ee Liyu Poliska.
Warar hoose oo ONA ka heshay dadkii howshan aggaasimayay baadhitaanka ayaa ONA u sheegay in Saraakiil sare oo kamid ah Dowlada Dhexe Ethiopiana ay soo gaadheen Jig Jiga kuwaas oo ka qeyb qaatay baadhitanadan. Saraakishan ayaa ah sidoo kale kuwo ku daba jira inay dad badan oo kamid ah maamulka Kililka oo lagu eedeyay inay baxsiga Ciidamadan Liyu Poliska qeyb ka yihiin in lagu eedeyn doono inay lunsadeen hanti iyo arrimo musuq-maasuq kadibna xabsiyada loo taxaabi doono.
Ciidmadi Hawaarinta ee Qomandaha ku jiray kadib markii wareysiyo lalayeeshay waxaa loo qaaday Xabsiga aan buuxsamin ee Jeel Ogaden halkaas oo la filyao in ciqaab kale ay kumuteysan doonaan.
Wali waxaa si tiro badan leh isusoo dhiibaya ciidamada hawaarinta oo koox koox u wada socda. Saraakishan katimid Dowlada dhexe Ethiopia ayaa lasocodsiisay u adeegahooda Cabdi UBO inn Ciidamada Liyu Poliska laga qaadayo awoodi xooganeyd ee horey loo siiyay midaas oo u saamaxaysay in Ciidamada Liyu Polsiku socdaal ugu dhex sameyn karaan gudaha Ogadeniya iyo xuduudaha dhinaca Somalia.
Ciidankasta oo Liyu Poliska kamid ah oo goob kale u gudbikara majiro illaa ay warqad ka heystaan militariga Woyanaha ee dhufeyska gabaadka ugu jira.